Tonga ny andro lehibe… | NewsMada
Tonga ny andro lehibe…
Tonga sahady sa izay vao tonga? Ny andro lehibe hiatrehana ny fandatsaham-bato amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa, izao. Na ahoana na ahoana, lavitra sy mafy ary sarotra ny lalana. Nahoana? Efa raharaha be hatrany amin’ny adihevitra saika tsy vita hoe mila fanitsiana amin’ny alalan’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny lalàmpanorenana, tsy tokony hametraham-pialana ny filoha ho kandidà…
Nandalo tamin’ny fifandroritana tamin’ny lalàm-pififidianana… nampifanditra, nolanin’ny depiote mpomba ny fitondrana tamin’ny kolikoly. Nampidina an-dalambe ny depiote mpanohitra, niafara tamin’ny fihetseham-bahoaka nitaky ny fialan’ny filohan’ny Repoblika. Tsy hadino ny fanapahan-kevitra politikan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), nanahatonga ny fifidianana mialoha ny fotoana.
Na hatramin’ny ora farany aza, nisy hatrany hetsika sy fitakiana ny hanafoanana ny fifidianana, ny fitsipahana ny voka-pifidianana… Manginy fotsiny ny fanahiana korontana lava hoe mety hisy indray ny krizy politika lalina sy maharitra. Mafy sy sarotra avokoa ireny rehetra ireny: tsy vita mora, mila fiaretana sy faharetana, finoana sy fanantenana ny amin’izao diavina izao sy ny ho avy atsy ho atsy… tsy fantatra.
Dingana lehibe no vita, fingana lehibe no hita teny an-dalana rehetra teny. Na izany aza, mbola tsy tafavoaka ny ala… Tsy kely lalana ny ratsy. Misy hatrany tsinona ny tsy maty voalavo an-kibo, mitompo teny fantatra, mihevi-tena ho tsy mba diso… Kibo mitsara tena ny tsirairay ny amin’izany. Ahoana no hisian’ny fifidianana tena ao anatin’ny fitoniana sy filaminana tanteraka? Indrindra aorian’izay…
Tsy moramora no nahatongavana amin ’izao… Sao tafita vao rendrika? Mila malina ny rehetra, fa tsy ilaozan’izay mahita tombontsoa manokana amin’ny korontana. Matoa misy voakorontana na manaiky korontanina, efa misy tsy milamina na tsy marin-toerana ao aminy izay: tsy tsara orina, tsy misy foto-kevitra mazava sy maharesy ijoroana, tsy mijery lavitra… Ao amin’ny tsirairay ve izay amin’izao andro lehibe izao?